कानुन पालना गराउनेहरू नै जातको... :: राजेश हमाल :: Setopati
राजेश हमाल काठमाडौं, साउन १५
राजेश हमाल। तस्बिरः सेतोपाटी
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले भोग्नुपरेको यिनै सामाजिक उत्पीडन र विभेदविरूद्ध नीतिगत बहस तथा पैरवी गरी सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने उद्देश्यले समता फाउन्डेसनले कान्तिपुर टेलिभिजनमार्फत 'जातको प्रश्न' नामक टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भएको छ। शान्ता नेपाली प्रोडक्सनको निर्माण रहेको यो कार्यक्रम अभिनेता राजेश हमालले सञ्चालन गर्नेछन्।
हाम्रो घरमा एकजना सहयोगी हुनुहुन्थ्यो। म पाँच-सात वर्षको हुँदा उहाँ २२-२५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला। म सानो बालकले उहाँलाई 'तँ' भनेर सम्बोधन गरिरहेको हुन्थेँ। मेरो बुबालाई कताकता चित्त नबुझेको रहेछ। एक दिन बुबाकै अगाडि तँ भनेको सुनेपछि उहाँले मेरो कान समातेर गाली गर्नुभएको थियो। घिसारेर मलाई ती व्यक्तिसँग माफी माग्न लगाउनुभएको थियो। अरुलाई आदर गर्नुपर्ने र हेप्न नहुने कुराको प्रशिक्षण मैले यसरी घरमै पाएको हुँ। यसले मेरो हुर्काइ र सोचाइमै असर पारेको छ।
रुकुमकै घटनामा, एउटा एउटा समुदायले अर्को समुदायमाथि क्रुर व्यवहार र हत्यासम्म गर्ने आँट कसरी गर्यो? कहीँ न कहीँ अपराध गर्नेले सोच्छ होला, जसले कानुनको रक्षा गरिरहेको छ, उनीहरू नै जातीय मुद्दालाई फितलो हिसाबले लिन्छन्, गम्भीर छैनन् कि!
यस्तै दृष्टिकोणबाट उनीहरूलाई त्यो अपराध गर्ने आँट आयो कि?
अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण गैरदलितबाट मारिएका अजीत मिजारको शव चार-पाँच वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालमा किन लावारिश छ? एउटा न एउटा पक्षमा निर्णय त भइसक्नुपर्ने हो नि अहिलेसम्म।
समाजमा यसले के नजिर बसाउँछ भने कानुन पालना गराउनेहरू पनि यो मुद्दामा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति गम्भीरता देखाउन चुकिरहेका छन् कि?
यस्तै विषयमा हामीले विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञसँग प्रश्न गरेका छौं र यो कार्यक्रमलाई 'जातको प्रश्न' भनेका छौं। विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिसँग यिनै विषयमा बहस गर्नेछौं।
कानुन आफ्नो ठाउँमा छ, व्यवहारमा उत्रिरहेको छैन। जातकै बलमा विभिन्न किसिमका अपराध गर्नेहरूमा हिम्मत कहाँबाट कसरी आइरहेको छ? जातको प्रश्नमा यसका उत्तरहरू खोज्ने प्रयास गरेका छौं।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन १५, २०७७, १८:२१:००
'लक्षणयुक्त कोरोना संक्रमित बढ्नु थप जोखिम, सचेत नरहे स्थिति घातक हुनसक्छ'
हाम्रो ढाड, सबको सरोकार?
खुट्टाको पानी खाने चलनलाई 'नो' भनेकी हुँ, भनिरहन्छु